Tattoos Iingcamango zobuciko - I-Cool Tattoo Ink Inkcazo Iimbono kwiMadoda nabasetyhini
Inja yezoTyhini kwaBafazi
Inja yiyona nto inomdla kakhulu abantu abasemhlabeni. Bathembekile, banothando kunye nomhlobo omhle nawuphi na umthandi wezilwanyana onokukwazi ukuwenza ngexesha lakhe lobomi. Iimpawu zeenja zikhumbuza uxhumano lomxhasi kumlingane wakhe wesilwanyana okanye luyakuchaza ...
Indlovu yeendlovu kubafazi
Indlovu yeendlovu iyaziwa ngokufanayo phakathi kwamadoda nabasetyhini. Ziyindawo enhle neyaneleyo yokunika indawo eyaneleyo yokuba umculi asebenzise ubuncedo kwaye afike kwiimpawu ezibalaseleyo. Uhlobo olubini lwezombatho zendlovu zikhethwa: Izindlovu zaseAfrika nase-Asia. Zizo ...
I-Tattoo Yamehlo Yabasetyhini
Iimpawu zamehlo ziyamangalisa kwaye zithi ziyiifestile emphefumlweni kwaye oku kwenza iimbophu zamehlo ezithandekayo phakathi kwamathandwayo amaninzi abathandwayo. Iidatto zamehlo zidlalwa ngamadoda kunye nabasetyhini kwaye zibaluleke kakhulu kumgcini. Ngezantsi kunzulu ...
I-Tattoos yesiXhosa seTyhini
I tattoos zekristin enye yezona tattoos ezikhethekileyo. Kubonakala ngathi kulula, kodwa ithetha kakhulu kumntu ogqayo. Kwakhona ezinye zezinto ezilula kunama tattoti eziza kubanjwa. Ezi tatto ziyancipha kakhulu, xa kuthelekiswa nezinye ezithathwa ...
I-Wolf Tattoo yabasetyhini
Iimpawu ze-Wolf zithandwa kakhulu kwaye zibhekwa njengelona tattoo. Zingenziwa zenziwe ngeendlela ezahlukeneyo kwaye zibonakaliswe ngeempawu ezahlukeneyo kunye neempawu. Njengazo zonke izitho zohlobo lwezilwanyana, imvu yesikhumba ibonisa impawu kunye neempawu zeengcuka. Umlingiswa ...
Umthi weTattoos kwaBasetyhini
Imithi ithathwa njengoluhlala ixesha elide kwaye lihlala lihlala liphela. Baya kusinda ixesha elide lokuphefumula kwezulu kunye nezixhobo, ezenza zibe ngumqondiso wamandla kwaye zilungelelanise kwiintlanga ezininzi. Umzobo womuthi luyilo oludumile kwi-tattoo yobuciko. Imithi, ngokubanzi, ibonisa ...
I-Tiger Tattoo yabasetyhini
Xa kuziwa kumathambo esilwanyana, i-tiger ihamba phezulu kunye neyona nto ibhetele ngayo. Ama-Tigers abe yinxalenye yefashoni, izenzo zobugqi, kunye neempahla zokudla iminyaka. Imibala yabo emihle yenza ukuba bathandeke kakhulu kwimfashini, ubugcisa kunye namathambo. Nangona ingonyama iqwalaselwa ...
Umama Indodakazi kaTattoo
Akumangalisi ukuba abafazi bafumane iittoti, namhlanje. Uninzi lwexesha, abafazi bafumana iidoti kunye kunye neqela labo. Kodwa namhlanje, i-tattoos enina-ntombi sele ithandwa kakhulu. Intombazana yentombazana yintombi yindlela ehle kakhulu yokusifakela ukuxhatshazwa olu khetho. Kubonakalisa ...
Tattoos zaseJapan ngeNtombazana
Ama tattoos aseJapane, ebizwa ngokuba yi-irezumi, yenye yeendlela ezithandwa kakhulu kwi-tattoo art. Intsingiselo ejulile yale tattoos yongeze ubunzulu obubugcisa obuye babancedisa baqhubeka iminyaka emininzi kwaye banyukisele isibheno kubo abaninzi ngaphandle kwenkcubeko yaseJapan. IsiJaphani …
I-Hummingbird Tattoo yabasetyhini
I tattoo ye-hummingbird ithathwa njengeyona tattoo ebonakalayo yabasetyhini, nangona abanye abantu beba nabo, nabo. Zingenziwa zenziwe ngeendlela ezahlukeneyo kwaye zibonakaliswe ngeempawu ezihlukeneyo kunye neemeko, ngemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu. Le tattoos ininzi ...
Hamsa Tattoo kwabesetyhini
I-tatsa tattoo ifanekisela isandla sikaThixo. Izisa umnini-lonwabo, inhlanhla, impilo kunye nenzuzo. Isandla se-hamsa sineentlobo ezahlukeneyo zokupela ngeenkcukacha ezibandakanya i-hamesh, i-hamsa, i-chamsa kunye ne-khamsa. Isandla se hamsa sineendlela ezimbini ezibalulekileyo. Isitayela esisodwa sifanelwe ...
I-tattoos ye-Half Sleeve yabaseTyhini
1 2 3 4 ... 30 Okulandelayo
iifatyambo zeentyatyamboutywala tattooI-Ankle TattoosiidotiIintliziyo zeTattoosbathanda i tattoostattoo yedayimanisibiniizigulanengombonotatna tattooihoi fish tattootattoo yamehloi-tattoostatto tattooscute tattoosngesandlazinyonii-cherry ityatyambotattoostattootattoIndlovu yeendlovutattoos kubantuTattoos zeJometritattoos zelangatattootattoos zenyangatattoosi tattooizithunywa zezulutattoos ezinyawotattoos zohlangazengalo zengaloIintyatyambo zeTattootattoosizifuba zesifubaiifoto eziphakamileyotattoosicompass tattooowona mhlobo womhlobodesign mehndiiifotto zentamoiimpawu zezodiac zempawuzomculo tattoosiipattoostattoos kumantombazanatatto flower flowerukutshiza amathambotattoo engapheliyo